Soo Saaraha Ugu Fiican ee Isku-laabma TPU iyo Warshad | Yilibao
qiyaastii 6 kg / gabal
1. Weji adag oo baaxad leh: Adiga oo beddelaya saamiga qayb kasta oo falcelin ah ee TPU, alaabooyin leh adkaansho kala duwan ayaa la heli karaa, oo kolba marka ay adkaanta adkaato, badeecaddu wali waxay ilaalineysaa dabacsanaan wanaagsan iyo inay xirto iska caabin.
2. Awood farsamo sare: Wax soo saarka TPU waxay leeyihiin awood culeys qaadid heer sare ah, caabbinta saameynta iyo waxqabadka nuugista shoogga.
3. Iska caabin qabow oo fiican: TPU waxay leedahay heerkul kala guur ah oo galaas hooseeya walina waxay haysaa dabacsanaan wanaagsan, dabacsanaan iyo waxyaabo kale oo jireed oo laga jaray 35 darajo.
4. Waxqabadka wanaagsan ee waxqabadka: TPU waxaa lagu farsameyn karaa habab wax kuleyl ah oo heerkul-kululeed, sida mashiinka wax lagu duubo, xoqista, iyo isku darka. Isla mar ahaantaana, TPU waxaa lagu shaqeyn karaa boqollaal sare oo qalab ah si loo helo polymer alloys oo leh astaamo isku dheellitiran.
Shirkaddu waxay taageertaa falsafadda "No No.1 tayo sare leh, oo ku xididaysan qiimaynta amaahda iyo kalsoonida lagu qabo koritaanka", waxay sii wadi doontaa inay u adeegto macaamiil duugoobay iyo macaamiil cusub oo ka socda guriga iyo dibaddaba si kululaa oo loogu talagalay Quots for China Baby Floor Mats for gurguurta , Haddii macluumaad dheeri ah loo baahdo, xusuusnow inaad na soo wacdo wakhti kasta!
Quots for China Baby Play Mat and Play Mat price, Ka dib sannado badan oo la abuurayo lana horumarinayo, iyadoo laga faa'iideysanayo kartiyo aqoon leh iyo khibrad suuqgeyn hodan ah, guulaha muuqda ayaa si tartiib tartiib ah loo sameeyay. Waxaan ka heli sumcad wanaagsan ka macaamiisha ay sabab u tahay alaabta our tayo wanaagsan iyo adeegga iibka wanaagsan. Waxaan si kal iyo laab ah u jecelnahay inaan abuurno mustaqbal barwaaqo iyo barwaaqo leh annagoo la kaashanayna dhammaan saaxiibbada dal iyo dibadba!
Isticmaal bac aan xirnayn iyo kartoon si aad uxirto derin
Hore: EPE Sunta aan fiicnayn ee E-saaxiibtinimada u leh Mat Mat
Xiga: XPE Laabista Mat (Edged Edge)
Tpu xumbo Baby Mat
Tpu xumbo Mat